Klopp oo sharaxaad ka bixiyay sababta ay Liverpool guuldarro uga soo gaartay kooxda Brighton – Gool FM
Klopp oo sharaxaad ka bixiyay sababta ay Liverpool guuldarro uga soo gaartay kooxda Brighton
Dajiye February 4, 2021
(Liverpool) 04 Feb 2021. Tababaraha reer Germany iyo Liverpool ee Jurgen Klopp ayaaa sharaxaad ka bixiyay sababta ay kooxdiisa guuldarro uga soo gaartay kooxda Brighton, kulankii xalay ee horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Brighton & Hove Albion oo marti ugu aheyd garooonka Anfield, kaddib markii loogu awood sheegtay 0-1, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada horyaalka Premier League.
Ciyaarta kaddib ayuu tababare Jurgen Klopp la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Waxaan la ciyaarnay koox runtii aad u fiican, taasi waa iska cadahay waxaan sheegay ciyaarta kahor inay fiican yihiin.”
“Anaga ahaan, Isbuuca wuxuu u muuqdaa mid aad u adag, sidaas darteed ma aanan firfircooneyn maanta, marka aadan firfircooneyn maskax ahaan iyo jir ahaan, lugahaaga si dhif ah ayey u xalin doonaan dhibaatooyinkaaga.”
“Ma aanan abuurin fursado nagu filan, waxa kaliya ee aan sameyn karno ayaa ah inaan u adeegsano waxyaabaha dhaca inaan wax ka barano, xalka had iyo jeer wuxuu ku jiraa ciyaartoyda.”
Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu sii raaciyay.
“Manchester City way duulaysaa, waana inaan xal u helno.”
Horudhac: Tottenham Hotspur vs Chelsea… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee London Derby)
Di María oo si maldahan u sheegay suurtagalnimada uu Messi ugu dhaqaaqi karo kooxda Paris Saint-Germain